Hery Rakotomanana : Mpitari-bato vilam-bava -
AccueilSongandinaHery Rakotomanana : Mpitari-bato vilam-bava
Efa nampoizina. Na tsy mbola nanomboka aza ny fifidianana dia efa hita avy hatrany ny lesoka tamin’ny fikarakarana ny fifidianana ary niteraka fimenomenomana teny anivon’ ny fiarahamonina manerana an’i Madagasikara izany.
Tonga teo amin’ny daty fandrotsaham-bato, ny 7 novambra teo, vao maika niseholany ny tsy fahafehezan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana na/sy mikarakara fifidianana (Ceni) tarihin’ny filohany, Hery Rakotomanana, ny asa sy ny andraikiny.
Tsy misy nandeha tamin’ny laoniny amin’ny ankapobeny ny fifidianana ary hita sy tsapa tamin’izany fa peta-toko. Porofon’izany ny tsy fisian’ny fitaovana tamina biraom-pifidianana maro, ny tsy fananan’ireo tompon’andraikitra amin’ny biraom-pifidianana karatra manokana ka tsy nahafahan’izy ireo niasa tao anatin’ny fotoana maharitra, ny tsy fisian’ny penina, ny fahataran’ny fahatongavan’ny vata fandatsaham-bato, ny fahamaroan’ny olona tonga handatsa-bato nefa tsy mahita ny anarany anaty lisim-pifidianana, sns.
Manampy izany, ny filohan’ny Ceni, Hery Rakotomanana, izay tokony ho maodely ary mitondra fanentanana ny olom-pirenena feno taona handatsa-bato indray no namoan-tsampona. Nilaza mantsy ny tenany rehefa nidina ifotony nijery ny fizotry ny latsa-bato tamin’ireo biraom-pifidianana sasantsasany teto an-dRenivohitra fa “…tsy handatsa-bato”. Izany ve no mpitantana eto amin’ny firenena? Mpitari-bato vilam-bava. Rehefa hita fa tsy voafehy ilay andraikitra tamin’ny alalan’ireo tsy fahatomombanana rehetra, toy ny hoe fitaovana avy any Afrika no nalefa sy nampiasaina teny anivon’ireo birao fandatsaham-bato ary tsy nokitihin’izy ireo mihitsy nefa tsy misy mandeha amin’izay laoniny rehefa nosokafana ary niteraka fisavorovoroana teny anivon’ireo toeram-pandatsaham-bato ireny.
Tsy manan-katao afa-tsy ny miala ary manipy andraikitra hatrany ity filohan’ny Ceni ity. Tsy mitady sy mikaro-bahaolana fa dia miandry baikon’ireo mpanara-maso vahiny. Tsy misy fepetra raisina manoloana ireny tsy fahatomombanana teny anivon’ny toeram-pifidianana sy fandatsaham-bato ireny, eny hatramin’ny sonia miisa roa hampanan-kery ny bileta aza tsy hanaovan’izy ireo antso avo amin’ny tompon’andraikitra eny anivon’ny birao fandatsaham-bato akory.
Etsy andaniny, mbola mahavita miaro ny Ceni ihany koa ny governemanta amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Serasera (MCRI) fa tomombana avokoa ny fitaovana ampiasaina rehetra, indrindra fa ilay fitombo-kase izay mitakosona ka mampanahy ny mpifidy amin’ny mety ho lasa vato maty ny azy ireo…
Manampy izany, tsy mbola hita sy tsapa ihany koa ny tena ilàna ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin’ireo firenena vahiny. Izy ireo ihany koa no mbola mibaiko ny Ceni amin’ny asa sahaniny. Hany ka tsy misy mandeha amin’ny laoniny fa vao maika misavoritaka ambony ambany ny fandatsaham-bato teny amin’ireo faritra maromaro. Noho izany, tsikaritra fa iny no fifidianana ho Filoham-pirenena 2018, fihodinana voalohany, peta-toko indrindra…